Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy hianareo, ka diniho izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika – FJKM Ambavahadimitafo Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy hianareo, ka diniho izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika |
Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy hianareo, ka diniho izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika
Publié le 22 novembre 2020 à 06:11
Alahady 22 novambra 2020, itondrana am-bavaka ny KPMS (Komitim-pirenena Miady @ SIDA) manerana ny sahan’ny FJKM, ibanjinana hatrany ny lohahevitra hoe « Miandrandra famonjena ny mino ».
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra, nalaina avy ao amin’ny Filipiana 3 : 17 – 21 : « 17Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ahy hianareo, ka diniho izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. 18Fa maro no mandeha, izay efa nolazaiko taminareo matetika, sady mbola lazaiko aminareo amin’ny fitomaniana koa ankehitriny, fa fahavalon’ny hazofijalian’i Kristy ireny; 19fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny, fa misaina ny amin’ny tany izy. 20Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo, 21Izay hanova ny tenan’ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ny tenan’ny voninahiny, araka ny fiàsan’ny heriny, izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy «